Big Flo sy Oli : nanolotra 500.000 euros, hanampiana ny mpiara-belona
Ray mpiahy ilay fikambanana « Secours populaire » ireo roalahy mpivohy gadona rap, Big Flo & Oli. Araka ny efa nampanantenain’izy ireo tamin’ny taon-dasa dia narotsany ho an’ny fikambanana
Sady vetivety no tsy lafo ny fanaovana izany ary romantika ihany koa. Ilay mpilalao sarimihetsika Mickey Rooney izay nivady tamin’i Ava Garner no nanomboka izany ny taona 1942 tao amin’ny “Little Churche of the West” izay efa tena malaza be any an-toerana. Efa niverina im-balo tao ary moa ity mpilalao sarimihetsika ity ary taorian’izay dia tsy voaisa intsony ireo olo-malaza tonga nivady tao amin’io fiangonana kely io izay ahitana lehilahy maka tahaka ny endrik’ilay mpihira Elvis manamasina ny mariazy. Isan’izany ireto entina aminao ireto.
1. Johnny Hallyday sy Adeline Blondieu: nivady indroa ka tany Las Vegas ny fanindroany
2. Angelina Jolie sy Billy Thornton: Izao mihitsy no paozin’izy roa nandeha nivady tamin’ny taona 2000 tany
3. Demi Moore sy Bruce Willis: Vao niaraka telo volana monja izy ireo dia nivady tao Las Vegas fa iray volana taorian’izay no nanao fety be
4. Frank Sinatra sy Mia Farrow: 31 taona ny elanelan-taonan’izy ireo tamin’ny taona 1966 nivadiany ary isan’ny antony nampisaraka azy izany, 2 taona taty aoriana
5. Elvis Presley sy Priscilla Beaulieu: Efa nitoe-jaza ny zanak’izy ireo Lisa Marie izy roa no nivady saingy nisaraka ny volana oktobra 1973
6. Joe Jonas sy Sophie Turner: nivady ny 1 mey 2019 lasa teo izy roa ireto tao anatin’ny ahamehana. Roa volana taty aoriana vao nanao fety be niaraka tamin’ny fianakaviana rehetra